3အောင်ထူသောကြေးနီ PCB2အလွှာရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Gerber သို့မဟုတ် ODB LF HASL Hot-Air ကိုဂဟေဆက် level IPC Class ကို II ကိုစံနှစ်ဦးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့ - တရုတ် 3oz ထူကြေးနီ PCB2အလွှာရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Gerber သို့မဟုတ် ODB LF HASL Hot-Air ကိုဂဟေဆက် level IPC Class ကို II ကိုစံနှစ်ဦးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့ပေးသွင်း,စက်ရုံ -WMD
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » မိုးသည်းထန်စွာကြေးနီ PCB
3အောင်ထူသောကြေးနီ PCB2အလွှာရှေ့ပြေးပုံစံ PCB Gerber သို့မဟုတ် ODB LF HASL Hot-Air ကိုဂဟေဆက် level IPC Class ကို II ကိုစံနှစ်ဦးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့
လေဟာနယ် အထုပ်,10PC များ / အိတ်
120*67မီလီမီတာ / 1up
2အလွှာစံ 3oz ကြေးနီ
2 အလွှာထူကြေးနီ PCB ရှေ့ပြေးပုံစံအင်္ဂါရပ်များ 3oz ထူကြေးနီဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်ကုသမှု HASL LF ဖြစ်ပါသည်, ကြေးနီ 3oz ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံး, အထူ 1.6mm ဖြစ်ပါသည်, ပစ္စည်း FR4 ဖြစ်ပါသည်. တစ်ဦး PCB ရှေ့ပြေးပုံစံဖွံ့ဖြိုးဆဲတစ်ဦးအစာရှောင်ကမ်းလှမ်း, ထုတ်လုပ်မှုသဘောတရားကနေသင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုရတဲ့အတှကျအကုန်ကျ-ထိရောက်သော option ကို, ဟာ Standard PCB ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အန္တရာယ်များအချို့အသေးအဖွဲအနေဖြင့်. အရည်အသွေးမြင့်တင်းကျပ်တစ်ဦးဦးဆောင် PCB ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, တင်းကျပ်-Flex ကို, နှင့် Multilayer PCBs, ကျနော်တို့အများဆုံးအဆင့်မြင့်ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ပေးရန်ကျူးလွန်နေကြသည်, ရရှိနိုင်အရည်အသွေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာထောက်ခံမှု
ပုံနှိပ်ဆားကစ်,ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုး, ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ် (PCB), ပုံနှိပ်ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့(PWB), တင်းကျပ်ပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့, လေးအလွှာဘုတ်အဖွဲ့, တောင့်တင်းသော4အလွှာပုံနှိပ်ဘုတ်အဖွဲ့.4အလွှာအပြာရောင် 1.6mm ဘုတ်အဖွဲ့.
1 1.0mm အထူ 1oz ကြေးနီ Gerber သို့မဟုတ် ODB LF HASL Hot-Air ကိုဂဟေဆက် level IPC Class ကို II ကိုစံတစျခုအလွှာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အတူအလွှာ FR4 အနက်ရောင်ဘုတ်
4 အလွှာ 0.8mm Flex ကိုတင်းကျပ် immersive ရွှေ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ပုံနှိပ်ထူးအိမ်သင်ဘုတ်အဖွဲ့
2 အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူ ENIG ကုသမှုက Black မှင်နှင့်အဖြူဒဏ္ဍာရီနျ Standard PCB ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းညီလာခံတွင်အတူအလွှာစံ PCB.